I-Pokémon Rumble Rush iphehlelelwe e-Australia kummiselo "othambileyo" | I-Androidsis
I-Pokémon Rumble iya kufikelela kwi-Android usazi ukuba ngoku iyafumaneka simahla simahla e-Australia. Isihloko esitsha se-Android esithemba ukufumana isabelo sentengiso esibalulekileyo phakathi kwabo bonwabele kwaye bonwabele iPokémon Go.
Kuya kufuneka uyazi ukuba i-Pokémon Rumble Rush sele ikhutshiwe eJapan, nangona enelinye igama, ngokuchanekileyo iPokémon Scramble SP. Ke iya kuba ngumcimbi wexeshana elincinci ngaphambi kokuba uqale i-adventure entsha kwenye ye-sagas eyaziwayo.
Kwaye sele ikhona ukumiliselwa okuthambileyo e-Australia, Ukuze upolishe umdlalo kwaye ususe ezo bugs zincinci ezinokuthi zenze mandundu amava emidlalo, oko kuthetha ukuba kungekudala siza kuyifumana kwiGoogle Play Store kwilizwe liphela.
Umdlalo oya kulandela umkhwa owunikiweyo we sebenzisa izakhono nolawulo phantse "ngesandla" kwiPokémon yethu njengoko iqhubeka kwiscreen. Kukwakho nokukwazi ukuqokelela kunye nokuphucula iPokémon entsha esizingelayo, kungoko ke siza kujongana nenye yeekseli eziphambili zePokémon Rumble Rush.
Isihloko esitsha se-freemium esifumanekayo kuso nasiphi na isixhobo se-Android 4.4 okanye ngaphezulu kwaye sivumela ukuthengwa kwee-micropayments ukusuka kwincinci ukuya kwezinye eziphezulu. Kuncinci malunga nomdlalo omtsha wePokémon ongakhange ubhengezwe ngokusesikweni kwezi ndawo kwaye nangoku awukawazi umhla wokumiselwa ngokusemthethweni.
Ukuba sele ikhona e-Australia kunokuthetha ukuba sinayo kungekudala okanye kuthatha iiveki ezimbalwa ukuyilungiselela ukumilisela kwilizwe jikelele. Nokuba kunganjani na, sinakos Omnye umdlalo pokemon ukulungele ukuphaka itafile ngelixa silindile enye enye ye-2020 kwaye oko kuya kuthatha ingqalelo ngakumbi kunenye. I-saga eqhubeka nokuhlaziywa ngezihloko ezitsha ukuze ingalahleki kwi-coba kwintengiso emnandi yemidlalo ehambayo.
I-Pokémon Rumble Rushle
Umthuthukisi: Inkampani yePokemon
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-Pokémon Rumble Rush malunga nokufika kwi-Android, esele ikhona e-Australia
UAsus uqinisekisa amandla ebhetri eya kuthi ifike ngayo iZenFone 6